Trollduino: gole aad u ... khaas ah guddiga horumarinta Arduino | Qalabka bilaashka ah
Trollduino: guddi aad u ... khaas ah Arduino
Waxaa jira taarikooyin badan oo rasmi ah oo la jaan qaadi kara Arduino. Fursadaha aan dhammaadka lahayn ee soo-saareyaasha raadinaya saldhig ay ku bilaabaan mashaariicdooda DIY. Hadda sameeyayaashu sidoo kale waxay leeyihiin qalab cusub oo dheeri ah, waxayna leedahay magac aad u xiiso badan: Trollduino. Laakiin ma aha waxa kaliya ee layaabka leh ee ku saabsan saxankan oo la mid ah a Arduino UNO taasina waxay isticmaashaa isla qaab isku mid ah.
Hadana haddii aad isweydiiso waxa ka dhigaya guddigan horumarinta mid gaar ah, runta ayaa ah inaad fiiriso guntinteeda ugu weyn. Intii lagu jiray Arduino iyo guddiyada kale ee horumarinta waa microcontroller ama MCU, kiis Trollduino waa wax aad u loo yaqaan koronto: haa, fudud 555 saacad.
Laakiin ... sug, sug! Runtii ma jiraan wax caynkaas ah? Hagaag, aan u gudubno qaybo. Sidaad ogtahay, IC 555 waa waqti-yaqaan caan ah oo leh fursado badan oo adduunka DIY ah. Waxyaabo waaweyn ayaa lagu samayn karaa qashinkan iyo qaybo kale oo kooban.
Sidaa darteed, qof (Khafiif ah Lee ayaa xiiseynaya Hackaday.io) oo ka yimid shabakadda internetka ayaa la yimid golahan Trollduino "yaab". Dariiqo lagu cabiro bulshada Sida magaceeda ka muuqata. Oo dhexdeeda ayuu ku soo jeedinayaa in loo isticmaalo a Arduino UNO kaas oo microcontroller-ka lagu badalay saacad 555 ah, aad ufudud, laakiin sifiican loogu adeegsan karo in laguxiriro qaybaha biinanka iyo barnaamijyada qaar.
Sawirradu waa dhab, iyaga gudahood waad arki kartaa sida uu seddexleydii 5-aad ugu dhigay saxan dhanka qaabka UNO. Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah kuwa wax iska caabbinta iyo kuwa wax xira ayaa lagu daray guddiga horumarinta, iyo xitaa isku xiraha jaakada iyo isku xiraha USB ee awoodda (maadaama aad awoodi doontid inaad xog yar ku keydiso 555 ...). Sida biinanka, sida aad u aragto inay sidoo kale la jaan qaadi karto Arduino UNO.
Y, xitaa hadday tahay kaftan, runtu waxay tahay inay fikrad fiican u noqon karto qaar bilow ah oo raba inay bilaabaan inay la shaqeeyaan IC 555 si fudud. Haa, xaddidnaanta weyn iyo tan oo kale, laakiin haddii aad dhigto iska caabyeyaal diimeed iyo kuwa wax beddela, waad ku ciyaari kartaa.
Hadaad xiisaynaysid waad awoodaa soo dejiso qorshaha oo arag macluumaad dheeraad ah halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » Trollduino: guddi aad u ... khaas ah Arduino
Xaqiiqdii, aad bey u xaddidan tahay marka la barbar dhigo dhammaan fursadaha ay bixiso 555 (ma dhahayo labo dambe), laakiin fikrad bilow ah maahan wax xun.
Ku jawaab 555ino
Howlsocodsiineed: sida loogu isticmaalo mootada adeegga adeegga Arduino
Potentiometer: wax kasta oo ay tahay inaad ogaato